Izindaba - Yini okufanele ngiyenze uma isibhamu sokuzivala sokuzivala singeke sazivale?
Yini okufanele ngiyenze uma isibhamu sokuzivala sokuzivala singeke sikwazi ukuzimela?
Yini okufanele ngiyenze uma isibhamu sokuzivala sokuzivala singeke sizivale?
Ukuthi isibhamu sikaphethiloli elolini likaphethiloli singazivala kanjani kuncike kakhulu ekutheni ikamelo elinomshini lingakha igebe elanele. Ngakho-ke, lapho isibhamu sokufaka uphethiloli singeke sikwazi ukuzimela, kufanele sixazululwe ikakhulu ngokuya ngemibono elandelayo:
1. Bheka ukuthi uphawu olukujoyinti phakathi komgqomo nomzimba wesibhamu lunokwethenjelwa yini. Bheka ukuthi i-O-ring ayilimele yini ejoyintini. Uma ilimele, ingashintshwa ngemuva kokufakwa esikhundleni.
2. Uma kunodaba lwangaphandle ku-taper surface ye-barrel cone valve, susa umgqomo bese ususa ukungcola uphinde ukufake.
3. Bheka igumbi lokuhlanza ukuvuza. Lapho ikhava ye-vacuum, i-diaphragm ye-vacuum iphukile noma isikulufa sokukhiya singekho endaweni, i-vacuum ayinakwakhiwa futhi izivale.
4. Izinga lokugeleza elincane alikukhiyeli wena uqobo: esimweni sokugeleza okuncane, izinga lokugeleza ketshezi liphansi, umphumela wokugeleza ketshezi ubuthakathaka, ikamelo elinomshini ngeke likhiqize i-vacuum eyanele, kanye namandla entwasahlobo intwasahlobo ayinakunqotshwa ukwenza isibhamu sikaphethiloli sizivale.
5 Uma uqonda umgomo osebenzayo nokusetshenziswa kwesibhamu sophethiloli esizimele, ungaxhumana nathi, sizokunikeza impendulo egculisayo.